Diagnostika neuropsikolojika sy fanombanana ny fitsaboana amin'ny kabary (taona fampandrosoana) | Fiofanana kognitive
Ny fizotran'ny diagnostika sy ny fitsaboana amin'ny fitenenana (ny fitomboana)
Iza no: Ankizy sy zatovo manana fahasahiranana any am-pianarana
Haharitra hafiriana izy io: 2-3 andro eo ho eo
Ohatrinona ny vidiny: 384 €
Ahoana no fiafarany: Tatitra farany sy ny fitiliana azo atao (DSA)
Any amin'ny toerana misy ny tombana: Via Ugo Bassi, 10 (Bologna)
Ahoana ny fomba hifandraisana anay: 392 015 3949
Ity karazana làlana ity dia mety indrindra amin'ny karazana toe-javatra maro. Ohatra, rehefa sahirana amin'ny fifantohana hatrany ilay olona, ​​mitadidy ny fampahalalana sy ny fomba fiasa (lahatsoratra hohalalinina, latabatra, fomba fikajiana ...), fanehoana hevitra, famakiana marina sy fahatakarana fampahalalana an-tsoratra sy am-bava.
Amin'ny toe-javatra hafa, ny fisalasalana dia mikasika ny mety hananan'ny zaza na ny tanora fahaizana ambony lavitra noho ny mahazatra ary, vokatr'izany, dia mety mila fampianarana manokana.
Ilaina indrindra izany raha ahiahiana ny sasany amin'ireto fepetra ireto:
dyslexia (famakiana olana)
dysorthography (olana momba ny tsipelina)
dyscalculia (olana momba ny kajy)
dysgraphia (olana miteraka fanoratana azo fehezina)
ADHD (ny fiheverana sy olana momba ny tsimatimanota)
Hafa ny resaka
Plusdotation (haavo ambony noho ny mahazatra)
Ahoana no fanaovana azy?
Resadresaka Anamnestic. Fotoana kognitifika izy io ary mikendry ny hanangona fampahalalana mifandraika amin'ny tantaran'ny klinika. Ity dingana ity dia manampy amin'ny famantarana ny mety ho olana ary manome orientation voalohany hametrahana ny dingana fanombanana.
Rafitry ny fanombanana sy diagnostika. Mandritra ny fanombanana, ny zaza (na ny tanora) dia iharan'ny fitsapana sasany izay manana tanjona kendrena amin'ny famotopotorana ny fiasan'ny kognitika sy ny fahombiazany amin'ny fianarana (ohatra, ny haavon'ny saina, ny fahaiza-manao, ny fahatsiarovana, ny fiteny, ny fahazoana mamaky, fanoratana sy kajy).
Fandrafetana ny tatitra sy fiverenan'ny tafatafa. Rehefa tapitra ny fizotry ny diagnostika dia hisy ny tatitra izay hamintina izay nipoitra tamin'ny dingana teo aloha. Hotolorana ny tolo-kevitra ho an'ny fitsabahana. Ity tatitra ity dia hatolotra sy hazavaina amin'ireo ray aman-dreny mandritra ny dinidinika famerenana, hanazavana ny fehin-kevitra tonga tamin'izy ireo sy ny tolo-kevitra ho an'ny fitsabahana.
Inona no azo hatao manaraka?
Miorina amin'ny zavatra nipoitra avy amin'ny fanombanana, ny lalana samihafa dia azo ampiharina:
Raha misy olana fianarana manokana, amin'ny alalan'ny mamaky 170 / 2010, tsy maintsy hamoaka antontan-taratasy antsoina hoe Personalized Didactic Plan (PDP) ny sekoly., izay hanehoany ny fitaovana fanonerana sy fandefasana azy izay tsy maintsy hampiasainy hanamboarana ny fampianarana momba ny fomba fianaran-jaza / zazalahy (jereo koa: fitiliana DSA: inona no hatao manaraka?).
Raha misy toetra hafa, toy ny fahasarotana amin'ny sain'ny olona, ​​ny fahasarotan'ny fitadidiana na ny haavo avo lenta dia azo atao foana ny mamorona drafi-pampianarana manokana amin'ny alàlan'ny boriboritany minisitra ao amin'ny BES (filàna fanabeazana manokana).
Fanampin'izay, fivoriana an'ny teny Therapy fanatsarana ireo lafiny mifandraika amin'ny fiteny na fianarana (mamaky, manoratra ary kajy), taranja neuropsychology fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fitadidiana ny fahaiza-manao sy ny lalam-piofanana ho an'ny ray aman-dreny hahitana ny paikady mifanaraka amin'ny fitantanana ny olana momba ny fitondran-tena.